❤️ Comment Savoir Si Quelqu'un Vous A Bloqué Sur Instagram - Winches Club
Ahoana no hahafantarana raha nisy nanakana anao tao amin'ny Instagram
Ny fahaizana milahatra mainty ho an'ny olona sasany amin'ny media sosialy dia tena manampy tokoa, saingy mety hahasosotra izany raha eo anilan'ny mpandray ianao nefa tsy azonao ny antony na ny fomba nitrangan'izany.
Raha heverinao fa voasakana ianao Instagram, Aza manahy : tsy ianao no olona voalohany nosakanana tamin'ny media sosialy ary azo antoka fa tsy ianao no ho farany.
Misy fomba maromaro hilazana raha tena voasakana ianao na tsia., koa aza misalasala manontany !
Ity no fomba ahafahanao milaza raha nisy nanakana anao Instagram.:
Ianao dia tsy afaka tsy mahita ny mpampiasa rehefa mitady azy ianao
Tsy afaka ianao jereo izy ireo ao amin'ny mpanaraka anao na ireo izay manaraka anao
Ny lahatsoratr'izy ireo aza miseho
Ianao dia tsy afaka tsy mahita ny Tantaran'izy ireo Instagram
Na dia mandefa hafatra ho azy ireo aza ianao, izy ireo tsy handray azy tsy
izy ireo tsy hahita tsy ny hafatrao
izy ireo tsy hahita tsy ny hevitrao amin'ny lahatsoratra hafa
ny Manjavona ny fifandraisana (raha nanana hafatra teo alohany ianao)
Ahoana no hahalalana raha nisy nanakana anao
Indraindray mamafa ny kaontiny fotsiny ny olona, na mandrara ny kaonty Instagram. Rehefa mitranga izany, ireo famantarana etsy ambony ireo dia manana toetra mampiavaka azy rehefa misy manakana anao.
Ity dia fomba iray fotsiny hahazoana antoka, ary miasa toy izao manaraka izao:
fanombohana amin'ny fikarohana azy ireo amin'ny kaontinao manokana. Raha tsy mahita azy ireo ianao, mety nanova ny solon'anarany izy ireo ; koa aza hadino ny mitady anarana hafa koa.
Ensuite, manontania olona raha afaka mampiasa ny kaontiny hitadiavana ilay mpampiasa ianao, na ampiasao kaonty hafa raha manana ianao.
karohy ny kaonty ary raha hita amin'ny kaontin'ny mpampiasa hafa izy io, mety ho voasakana ianao.
Tsy io ihany no fomba hahafantarana raha tena voasakana ianao, fa hitanay fa ity no fomba mora sy azo antoka indrindra.
Inona no azoko atao raha nisy nanakana ahy tao amin'ny Instagram
Indrisy, tsy dia misy zavatra azo atao amin'ity toe-javatra ity, satria ny rafitra dia natao hiarovana ireo mpampiasa manakana ny hafa, ary marina izany. Na dia izany aza, raha mieritreritra ianao fa voasakana tsy nahy, ary ity dia olona fantatrao, mifandray a sehatra media sosialy hafa ary anontanio azy ny momba izany.
Indraindray, mety ho lesoka izany ary milamina ny zava-drehetra, afaka manafoana anao eo anilany izy ireo. Raha izany anefa dia tena fanakanana, ity no anjaranao hametraka ny marina sy hahalala izay tsy nety. Tadidio fa raha mahasosotra na manakorontana an'io olona io ianao, manan-jo hanao izany izy ary mety ho voasakana ianao.
Ny fitaovana fitomboan'ny Instagram tsara indrindra
Tsy avelan'ny Instagram hiditra aho : Torolàlana fanamboarana
Inona avy ireo Bots Instagram tsara indrindra amin'ny 2020 ary ny fomba hiarovana ny kaontinao?
Ahoana ny fomba hifandraisanao amin'ny influencers amin'ny Instagram
Auto Toy ny Instagram: Bot ho an'ny tiana mandeha ho azy
Ahoana ny fomba hanampiana tantara ao amin'ny Instagram
Lahatsoratra teo alohaAhoana ny fomba hifandraisanao amin'ny influencers amin'ny Instagram
Lahatsoratra manarakaTsy avelan'ny Instagram hiditra aho : Torolàlana fanamboarana